XCMG ebupụ ya Road Machines na batches na Kenya - China Xuzhou Fenghe Intelligent
XCMG ebupụ ya Road Machines na batches na Kenya
Na ike nke ya siri ike na nkà na ụzụ kpọkwara, zuru okè mgbe-sales ọrụ na elu na-eri arụmọrụ nke ngwaahịa, XCMG kpochapụ osisi na a na-adịbeghị anya mba ikele maka integrated osisi Kenya. Ugbu a, 19 elu ígwè Refeyim na nkwekọrịta ngwugwu, esịnede graders, 2-mita-egwe ọka igwe, pavers, abụọ-drum ụzọ rollers na ndị ọzọ na elu-ọgwụgwụ zuru nkeji akwabawo na mba, a na-jikeere-ekere òkè ya akụrụngwa mwube drive.
XCMG High-ọgwụgwụ Road Machines na Wuzhou International Container Ọnụ na Tianjin
Kemgbe afọ 30, XCMG guzobere karịrị 40 enyemaka na ndị nnọchiteanya itieutom gafee ụwa, mgbe niile ịgbasa ya edidu na mba nkebi. N'oge, site ya ọtụtụ zuru ụwa ọnụ ahịa na netwọk nke ihe karịrị 300 na-ere ahịa na 500 ikikere enye ọrụ, ọ na-ebupụ a dịgasị iche iche nke ya na ngwaahịa na 177 mba na mpaghara, ogo mbụ na anụ ụlọ na-ewu igwe bupu ndi oru maka ọtụtụ afọ a n'usoro. N'afọ a, XCMG mere ka nnukwu rụzuru na esenidụt ahịa & ahịa, na-agba àmà ya na-ebupụ ala graders, okporo ụzọ rollers na ihe pavers na-eto eto 55%, 33% na 31% karị N'ime otu oge ikpeazụ afọ.
XCMG exported 100 Road rollers na United States na 1990s, na-agbasa na Record nke Bulk Export nke Domestic Machines na Time.
XCMG rutere a ekwu ọtụtụ nnukwu iwu si Venezuela na 2011.
Ndị a amụọ dịrị RMB 4.8 ijeri na ngụkọta na gụnyere 500 nkeji nke zuru ụzọ igwe, ọkụkụ ihe niile na-oge elu ma bupu uru na olu, na-eme ka a aha maka Mere na-na-China ụdị na zuru ụwa ọnụ ahịa obodo.
Mr. Wang Min, XCMG onyeisi oche, Mere mmepe Speech na Launch ememe
XCMG ka exported ya na ngwaahịa na 178 mba na 2017, na-eduga ya ọgbọ na OBOR mpaghara site mbupụ olu.
XCMG exported 100 Road rollers ka North America na 2017
XCMG: Onye Ndú na China si Construction Machinery Industry